Full Carbon Fiber Sheets - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Full Carbon Fiber Sheets)
Ishidi le-3K Twill Matte Carbon Fibre 5.0mm ephelele
Ishidi le-3K Twill Matte Carbon Fibre 5.0mm ephelele Leli shidi le-carbon fiber sheet eligcwele, lidume kakhulu kuma-carbon fiber sheet sheet.Both 0/90 degree kanye ne-0/45 / -45 / 90 degree (Quasi-isotropic) yokuhlelwa kwekhabhoni fiber sheet . I-1k, 1.5k, 3k egcwele i-carbon fiber amashidi nawo alungile, asuselwa...
I-Carbon Fibre Plate engu-4.0mm yama-FPV Frames
I-100% Egcwele I-3K Twill Matte Carbon Fiber Sheet 6.0mm Leli yi-c arbon fiber sheet egcwele, edume kakhulu ezintweni zokwenziwa kwekhabhoni . Womabili ama-0/90 degree kanye no-0/45 / -45 / 90 degree (Quasi-isotropic) ama- carbon fiber amashidi atholakalayo. I-1k, 1.5k, 3k egcwele i-carbon fiber amashidi nawo...
Amashidi Wangempela we-Carbon Fibre eBlockheads
Amashidi Wangempela we-Carbon Fibre eBlockheads Muva nje abantu bebesebenzisa amashidi we-carbon fiber ama-drones esikhundleni sezinye izinto. Njengoba ilula futhi izinzile, ithatha amanye amapuleti afana nengilazi yekhabhoni nengilazi yefayibha. Futhi sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti we-G10. Amashidi...
Full Carbon Fiber Sheets I-3k Full Carbon Fiber Sheet Full Carbon Fiber Tubes Ama-3K Carbon Fiber Sheets Isicelo seCarbon Fiber Sheets Ama-Cnc Carbon Fiber Sheets Carbon fiber sheet I-3k Full Carbon Fib Sheet Black